Abakhiqizi be-Pyridines-APICMO CDMO
Imikhiqizo > Ama-Pyridines
I-Pyridine i-Density 0.978 g / cm3. Iphuzu le-Flash 68 ° F. Amapayipi ayinzima kune-air. Inobuthi ngokungenisa kanye nokuphuza. Ukushisa kukhiqiza ama-oxide anobuthi we-nitrogen.
I-Pyridine iyinhlanganisela ecacile yiphunga elimuncu, i-putrid, nefana nenhlanzi. Kungenziwa ngamatje angcolile noma amanye amakhemikhali. I-pyridine isetshenziselwa ukuqeda ezinye izinto. Ibuye isetshenziselwe ukwenza imikhiqizo eminingi efana nemithi, amavithamini, ukunambitheka kokudla, amapende, amade, imikhiqizo ye-raber, amathrekhi, izinambuzane kanye nokubulala ukhula. I-pyridine nayo ingakhiwa kusukela ekuqhekekeni kwempahla eminingi yemvelo emvelweni.
Kuboniswa konke 10 Imiphumela